Home सरल र सजिलो तरीका घर र कार्यस्थलमा वातावरणलाई मद्दत पुर्‍याउन - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
अप्रिल 16, 2021 अप्रिल 13, 2021 एलेक्स बेल्से ब्लग, विशेष समाचार
मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध लडाई घर र काम दुबै ठाउँमा लड्न सकिन्छ।
ग्रहलाई मद्दत गर्न घरमा गर्न सकिने त्यस्ता चीजहरूमा कम्पोष्टि green, हरियो उत्पादनहरू प्रयोग गरेर, र बचेका चीजहरूलाई पुनःपूर्ति गर्ने समावेश गर्दछ।
ग्रहलाई सहयोग पुर्‍याउन काममा गर्न सकिने त्यस्ता चीजहरूमा विद्युतीय सवारी साधनहरू मार्फत यात्रा, दोस्रो हातका सामानहरू खरिद गर्न, र सम्भव भएमा ऊर्जा गहन उपकरणहरू बन्द गर्ने काम समावेश छ।
हामीमध्ये धेरैले चाँडो र सजिलो तरीकाहरू खोजिरहेका छौं जुन हामी वातावरणलाई मद्दत गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ कि ग्रह बहुमूल्य छ र मद्दतको लागि तरिकाहरू खोज्न चाहन्छौं, तर यसले निराश वा निराश हुन सजिलो पनि फेला पार्न सक्छ। त्यहीं यी उपयोगी सुझावहरू आउँदछन्!
चाहे तपाईं घरमा हुनुहुन्छ वा काममा - जहाँ तपाईं आफ्नो बहुमत खर्च गर्नुहुन्छ - त्यहाँ साना तरीका छन् कि तपाईं अझै ठूलो प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। यदि सबैले सानो परिवर्तन गरे, हामी ठूला परिणामहरू अनुभव गर्नेछौं.
हामीले प्रयोग गर्ने सफाई उत्पादनहरूले वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।
तलका सुझावहरू र सुझावहरू पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् कति पर्यावरण अनुकूल अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे काममा वा घरको वरिपरि।
१. हरियाली उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
हामीले प्रयोग गर्ने सफाई उत्पादनहरूले वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। जबकि केहि उत्पादनहरू विशेष रूपमा संवेदनशील वा हाइपोलेर्जेनिक हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो, अरूले ठूलो नतिजा प्राप्त गर्ने अझै पनि भारी लागतको साथ आउन सक्छन्।
तिनीहरूले छालाको अवस्था, श्वासप्रश्वास समस्या, वा पानी आपूर्ति र समुद्रहरूमा विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ। हरियो विकल्पहरूमा स्विच गर्दै, जस्तै ती प्राकृतिक, रिसायकल, वा एकदम थोरैमा अतिरिक्त विष वा माइक्रोबेडहरू (प्लास्टिकको कणहरू) प्रयोग नगर्नु उत्तम विकल्प हो।
खाद्यान्नलाई वातावरण मैत्री बनाउने कम्पोस्टिing सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी तरीका हुन सक्छ। शैली र आकारको दायरामा अब कम्पोस्ट बिनहरू छन्, जसको मतलब तिनीहरू प्रयोग गर्न सजिलोको लागि घर भित्र राख्न सकिन्छ।
उनीहरू अब तपाइँको सजावट मा हस्तक्षेप गर्न को लागी एक खराब गन्ध को कारण, वा बाहिर राखिएको र यसैले प्रयोग गर्न कम सम्भावना छ। कम्पोस्ट बिन डिजाइनहरू आधुनिक आधुनिक इको सचेत जीवनशैलीको लागि उपयुक्त छ!
तिनीहरूले तपाइँको खानाको फोहोरलाई एक तरिकाले भत्काएर काम गर्दछन् जसको मतलब यो माटोलाई प्रशस्त समृद्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा अधिक सुरक्षित ढ disp्गले निकाल्न सकिन्छ। ल्यान्डफिलमा जाने खानाले फोहोर मात्र बढाउँदैन तर भारी उत्सर्जन पनि निम्त्याउन सक्छ। कम्पोस्टिing एउटा उत्तम तरिका हो जुन हामी घरमा मद्दत गर्न सक्छौं!
Ft. बाँया पछाडि प्रयोग गर्नुहोस्
खानाको फोहोर घरको फोहोरको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो - र त्यसभन्दा पछाडि। तपाईले वातावरणमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाँकी प्रयोगहरू प्रयोग गरेर र तपाईंको खानाको फोहोर घटाएर।
त्यहाँ अब छ स्वादिष्ट व्यंजनहरु को महान श्रृंखला जुन विशेष रूपमा सामान्य बाँकी अपहरू प्रयोग गर्ने उद्देश्यले हो, साथसाथै किफायती भण्डारण समाधानहरू जसले लामो समयसम्म खाद्य ताजा राख्छ।
तपाईं यस सामग्रीलाई अन्य सामग्रीहरू जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स र कपडा, पुन: प्रयोग, रिसाइक्लि, वा तिनीहरूलाई पुनः फ्याँक्नुको सट्टा repurposing रूपमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं परिवार र साथीहरूसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, अनलाइन बेच्न सक्नुहुनेछ, वा कपडालाई नयाँमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। रचनात्मक हुनुहोस्!
१. यात्रा 'हरियाली'
दैनिक कम्युट विश्वव्यापी प्रदूषण र हानिकारक उत्सर्जनका लागि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन सक्छ। यति धेरै, कि धेरै सरकारहरूले इलेक्ट्रिक कारहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन, नयाँ चक्र मार्गहरू निर्माण गर्ने र अधिकका रूपमा विकल्पहरूबारे छलफल गरेका छन्।
दैनिक कम्युट विश्वव्यापी प्रदूषण र हानिकारक उत्सर्जनका लागि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन सक्छ।
तर तपाईंले उनीहरूका लागि कुर्नु पर्दैन! तपाईं सीधा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आफ्नै कम्युट मूल्या by्कन गरेर। के त्यहाँ त्यस्तो तरीका छ कि तपाई यसलाई अधिक वातावरण मैत्री बनाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक पनि? सायद हिंड्न वा काम गर्न साइकल चलाउन एक विकल्प हो, हप्तामा केवल केही पटक।
तपाईं इलेक्ट्रिक कार, वा समूह यात्रा विकल्पहरूमा स्विच गर्न पनि सक्नुहुन्छ। धेरै व्यवसायहरूले कम्पनी व्यापी टाढाका कामलाई समर्थन र प्रोत्साहित पनि गरिरहेका छन्। यो बिभिन्न कारणका लागि हो, तर यो अधिक वातावरण जिम्मेवार पनि हुन्छ किनकि यसले यात्रुहरूको संख्या घटाउँदछ।
तपाईको लागि उत्तम विकल्प के हो भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस् र साना तरिकामा पनि कार्य लिनुहोस्!
Second. दोस्रो हातका सामानहरू खरीद गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नै व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ भने, तपाईंसँग मुख्य सामग्री, आपूर्ति वा सेकेन्ड ह्यान्ड अप्लान्डिंग सामान खरीद गर्न विकल्प हुन सक्दछ। यसले ल्यान्डफिलमा जाने वस्तुहरूको संख्या घटाउँछ। साथै प्राय: नयाँ नयाँ वस्तुहरूको लागतको अंशमा आउँदछ। यो अधिक लागत प्रभावी - र हरियो - तपाईंको व्यवसायको लागि हो!
यदि तपाईं आफैंको लागि काम गर्नुहुन्न भने, तपाईं आफ्ना सहकर्मी र मालिकलाई सम्भव भए जहाँ अर्को हात खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ वा पुन: साइकल कागज वा कम गरिएको प्लास्टिक जस्तो वस्तुमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ सानो परिवर्तन गर्न मात्र सम्भव छ, यहाँ सम्म कि एक रिसाइक्लि system प्रणाली वा रीसाइक्लिंग बिन कार्यान्वयन पनि राम्रो तरीकाले सुरू गर्न सकिन्छ।
It. यसलाई बन्द गर्नुहोस्!
जब तपाइँ र तपाइँका सहकर्मीहरू कोठाबाट बाहिर हुन्छन्, प्रकाश बल्बहरू, पानी, बिजुली स्रोतहरू र अनावश्यक ऊर्जा प्रयोग गरेर अरू केही बन्द गरेर ऊर्जा खर्च कम गर्न निश्चित हुनुहोस्।
अधिक ऊर्जा-कुशल बल्बहरू र विकल्पहरूमा स्विच गर्न पनि सम्भव छ।
सानो तर प्रभावकारी परिवर्तन र एक सक्रिय दृष्टिकोणको साथ, तपाईं वातावरणमा सकरात्मक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ चाहे घरमा होस् वा काममा!
सांप्रदायिक समाचार वातावरण हरित जीवन स्थिरता